Kedu agba kacha mma maka igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Agba agba igwe kwụ ọtọ - ngwọta na-adịgide adịgide
Agba agba igwe kwụ ọtọ - ngwọta na-adịgide adịgide
Kedu agba kacha mma maka igwe kwụ otu ebe?
Top 5 ọgba tum tum na-egbuke egbukeAgbaNa ere
Royal Enfield Thunderbird 350X: Bulu.
TVS Apache RR310: Uhie.
Achọrọ m igba agba igwe nke m, ọ bụ nnukwu ụzọ iji hazie ya ma nye ya ndụ ọhụụ, mana m na-atụkarị ụjọ, ọ bụ nnukwu ọrụ iji gbaa igwe kwụ otu ebe mana ọ gafere ịgbachi gị ụmụ nwoke nyefere ụfọdụ nnukwu nkwalite na igwe kwụ otu ebe nke ị gbasasịrị na unu nwere mmụọ nsọ nke mere na m ga-anwale ya, emebeghị m nke a ma achọrọ m nduzi ọkachamara na onye ka Ali na Bex mma karịa Fatta Creations, ugbu a enwere ike ị ugbua soro ha na Instagram, ọ bụ n'ezie otu n'ime akaụntụ Instagram kachasị amasị m maka Ya mere, ka anyị zute ha n'ọmụmụ ihe ha, echekwara m na m nọ ebe kwesịrị ekwesị, lee ka ndị a si maa mma, daalụ maka ịhapụ anyị nke ahụ ọ dị mma, ị bụ Nnọọ nnọọ mma jụụ m chere na anyị ga-mma na-egosi gị Ali si omumuihe na Bex si omumuihe bụ a akụ trove nke pụtara omenala okpokolo agba dị ka D. ị maara na m na-eme a N'onwe Gị ịgba agba na otu nke m ochie anyịnya igwe na N'ezie m ga-eme ya onwe m na diyi agagh enwe nke obula ihe ndia achoro m ama otu esi eme ya nwere ike obu okara ka igwe gi Ee ee ihe bụ Okpokoro ya, ka anyị leba anya n'ihe ị nwetara Yabụ nke a bụ igwe kwụ otu ebe m chọrọ ịgbanwe, ebee ka m ga-amalite, echere m na m ga-adọkpụ ya? Ihe niile gbadaa, wepụ agba ahụ, ọ bụrụ na ịnwere igwe ma ọ bụ aluminom dị ka nke a ma ọ naghị emebi emebi, chọta mpaghara emitter, ị maara na ha na-eji ájá dị mma ka ha wee ghara imebi aluminom nke ukwuu, mana ọ na-eme n'ụzọ nkịtị na-enye gị isi zuru oke maka agba. Nọrọ na-ege ntị ma tụkwasị m obi, ọ bụrụ na ị nọrọla otu ụbọchị na-ewepu agba ahụ n'ụgbọ ịnyịnya ígwè na-efu £ 30-35 iji mee ka nke a dị ka ụlọ ọrụ na-emepụta akụrụngwa Ka ịhapụ bụ ọnụ ahịa na ị ga-emefu nke ọma, enwere ihe abuo anyi kwesiri ime iji mee ya, um, ọ bụrụ na ịfụ ihe ihe agba ahụ na-achapụsị ọfụma mana ọ bụrụ na otu n'ime akwụkwọ mmado ahụ dị ebe a, otu n'ime ihe mmado mara mma ndị a, ọ bụrụ na osisi anaghị agabiga nke ọma, ọ na-amịkọrọ ume nke ihe dị mma na yabụ kedu ihe ị ga-eme ya? ga-aga na njedebe, mana ị ga - ejedebe na riiji ebe akụkụ nke aluminom na - arapara.
Ya mere, anyị ga-ehichapụ nke ọ bụla akwụkwọ mmado ahụ tupu anyị enweta ya na blaster, ị ga-enwekwa ngwụcha dị nro mgbe ị nwetara ya. Ọ dị jụụ ọzọ ebe ọ bụ na ndụdụ m bụ carbon enweghị m ike ịme ha na-enwu gbaa nwere na m ga-eme ka m gbue onwe m. Ali ga-ejikarị eburu ya na carbon, ma maka ọrụ a ọ ga-adị mma naanị iwepụ ihe ngosi ahụ na akara ngosi iji mee ka ọ dị mma mgbe ahụ anyị ga-agafere ya na A320 tupu anyị ebute ya mgbe anyị bupụsịrị anyị nọ ebe a na ụlọ ọrụ Penfold metallization ebe m na-aga ịnwe okpokoro agba m maka eserese, yabụ ka anyị gaa chọta Jed ma hụ ihe sandblasting bụ, lee ebe a mara mma, etiti ahụ agbawaala kpamkpam na nke a were ihe dị ka nkeji 15 na a otutu mma karịa m gaara eme m otú obi dị m ezigbo ụtọ na m mere ya na ugbu a ọ bụ oge maka fun akụkụ wetuo obi etiti ihe niile dị njikere ugbu a ọ bụ oge maka ihe isi ike anwụ agba ịhọrọ nke ahụ bụ ihe niile m maara bụ na m chọrọ ihe dịtụ obere dịtụ ntakịrị na-enwu ma ọ nwere ike ọ bụ mma na enwere m agba ole na ole lee ihe ị chere kwekọrịtara na ụdị mgbanwe a ma bụrụkwa ezigbo lousy.Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume site na aerosol, ị nwere ike iji aerosol mee ihe abụọ a. nsogbu adighi, wepu ha abuo, e, rue to tho se mkpebi abụọ siri ike nke mere na nke a bụ ụda olu abụọ ya mere ọtụtụ ndị na-emepụta igwe kwụ otu ebe na-eji agba ahụ ugbu a ọ dịkwa ya? a mgbanwe site na-acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo, nke a na-na-ise shades nke a bụ a bit ọzọ ikpọ karịa nke a ee m chere na m ga-aga a na m chere na m ga-aga a na m n'ezie na-amasị nke a otú ahụ ka m họọrọ nke m? Tee ma ihe m kwesiri iji mee ka nke a mee maka akara paụnd 100 ị nwere ike nweta ihe niile ịchọrọ ka ihe mbụ ịchọrọ bụ ihe mbụ ịchọrọ inweta, na ị ga - enweta ya niile n'ụdị aerosol, wee were nke ahụ agba mkpa ka agba agba igwe kwụ otu ebe nwa mbụ otú a na agba na-adabere na a mara mma nwa isi kootu otú i nwere a nwere nke nwa na mgbe ahụ na agba ya bụ Chromacoat akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke na-aga n'elu nwa isi kootu na-enye gị na mmetụta, na mgbe m ga-akwado uwe mkpuchi doro anya 2k, ya mere ọ bụ varnish, mana nke ahụ bụ 2k, yabụ ị na-agwakọta kemịkal abụọ dị iche iche, ọ bụ vakpo epoxy, naanị ihe nwere vkrik 2k bụ na o nwere ụfọdụ ihe ọjọọ dị na ya yabụ na ị ga- eyi ihe nkpuchi, ma ọ dịkarịa ala ihe nkpuchi unyi ma mee ya n'èzí na ezigbo onye ofufe nke na-acksụ ọkụ ọkụ ma ọ baghị uru ichere ụbọchị kwesịrị ime ya n'èzí na mpaghara nke ọma, ị nwere ike nweta 1k nke agba ahụ ike. ihe ize ndụ dị obere karịa na-enweghị ihe ọ bụla na-echegbu onwe gị, mana maka longev ity, 2k bu uzo iga ebe i no ebe a um anyi ga-egosi gi etu esi ese ihe, o gha enyere gi aka ima ihe ichere mgbe i na eji aerosol.
Ọ gaghị abụ otu ihe ahụ mana ọ na-enye gị ezigbo echiche ee nke ahụ ga-adị mma biko enwebeghị mgbe m tinyere ihe ọ bụla ebe ahụ wee hụ tupu nke a bụ ihe na-atọ ụtọ iji zere anyị ịmalite primer na mpaghara anyị achọghị ikpuchi ya. anyị chọrọ ikpuchi ya ya mere na m nwere ụfọdụ masking teepu ebe a na m ga-gaba tube oche tube na ala mgbodo ma anyị nwere ụfọdụ bungs na ala mgbodo ma i nwere ike ikpuchi na ọ bụrụ na ị na-enweghị bungs otú mgbe ọ na-abịa na tingse okpokolo agba gị bụ ihe ịchọrọ iji egbe na ịgba agba mgbe ị rutere ya, akụkụ nke ị ga - ebu ụzọ wee pụta na njedebe belụsọ ma ị nwere ezigbo ihe na - akpalite nchịkwa nke dị oke siri ike na aerosol enwere ike ị ga - atụ aro na ị ga - abịa na njedebe ya ọ bụghị gị? Nweta agba dị ntakịrị nke nwere ike ibute Arunas. Anyị na-arụ ọrụ na 2k primer taa m ga-atụ aro ka ị yikwasị ihe mkpuchi a. O nwere ikuku ma o gha ewetara gi ikuku ohuru kama iku ume na uzuoku ma mee ka ihe ahu banye n'akpa ume gi.
Snot ọ bụ mba m bidoro na-eme na ụfọdụ akwụkwọ ka m wee nwee mmetụta na ya, ugbu a ọ bụ oge maka ezigbo m ga-anwa ịkwaa my forks Ya mere nke a bụ igwe kwụ otu ebe m, ihe niile akwadoro ma dịkwa njikere maka ọkwa ọzọ, ana m ekele gị nke ukwuu na-enyere m aka taa ma jiri ya na nnukwu ihe omumu gị a nabatara gị nke ọma, nwee ndụmọdụ ndị ọzọ, nwee ndidi, ee, n'ezie ndidi bụ nnukwu ihe na emeela nke ọma, n'ezie ee nke ahụ na-ekwe ha nkwa nke ukwuu maka ọdịmma maka agba ekele ị ga - amalite ugbu a n'onwe m ma m ga - amalite site na mmiri sanding nke etiti ahụ na 600 grit sandpaper ụfọdụ mmiri ọkụ ncha m ga - arụ ọrụ naanị etiti ahụ na ndụdụ na - ewepụ ezughị okè niile, mana ọ ga - abụ nke zuru oke ma ọ bụrụ na ị achọghị ime ihe ọ bụla crazy dị nnọọ ilekwasị anya na-eji ire ụtọ imecha ma ọ bụrụ na ọ bụ obere E nwere bumps si akọrọ primer, ju-elekwasị anya na ndị a, otú ahụ ka m kpamkpam sanded eku na dị ka ị pụrụ ịhụ na e nwere nnọọ ihe a obere agba ekpe na etiti ya mere anyi kwesiri ihichapu nke ahu tupu oge mbu aga m adi ụfọdụ mmiri na a Were a ákwà na-ehichapụ ya ehichapụkwa ihe niile ala ahụ m ga-ehichapụ na nke a primer ka ya mmezi ọcha na mgbe ahụ, ọ bụ oge maka isi Coatali nyekwara m ndị a akwụkwọ mmado na ndị a akwụkwọ mmado na isi tube, na n'okpuru mgbodo na oche na-anọ na brek aga calipers na ụfọdụ na ndụdụ naanị ịga ebe ọ bụla m nnọọ achọghị ọ bụla agba otú niile akwụkwọ mmado nọ na ọ dị njikere maka nwa isi uwe na ọ bụrụ na ị na-eji aerosols ka nke a ọ dị mma nke ukwuu iyi nkpuchi ya mere enwere m ihe nkpuchi na-ewu ewu ebe a, um, mana ozugbo m tinyere ihe nkpuchi ahụ, ịgaghị enwe ike ịnụ ihe ọ bụla, yabụ m ga-aga n'ihu ka m nwee ihu ọma na olile anya. Agaghị m emebisi ya ya mere basecoat ahụ emeela m chere na emere m ya ọfụma karịa ihe niile ma ugbu a anyị bụ j, a ga m ewere ya n'ime n'ihi na ọ dị mma n'èzí, yabụ nwetụrụ ọkụ karịa kpọnwụọ ya, ya mere, mgbe m nwesịrị uwe ojii mbụ nke ụnyaahụ, etinye m uwe nke abụọ wee weta ya n'ime ahụ ọkụ ma gafere Ka ọ kpọnyeọ n'abalị ma ọ dị ezigbo mma Obi dị m ụtọ nke mere taa, aga m eji apre paint, hichapụ ya ma aga m arapara na stencil a nke becca ji obi ike kee, enwere m di na nwunye nke dragons welsh na myinitialsthat m ga-eji welsh m ga-ejikọta abụọ na ndụdụ ahụ na abụọ na oche oche na mgbe ahụ ma eleghị anya, m ga-ede aha m na ala tube Amaghị m nke ọma na emebeghị m uche m ma enwere m olileanya ọ dị mma na nkeji ka ee ka anyị rute na nke ahụ, akwụkwọ mmado m nọ ebe ahụ, azụrụ m ya n'ihu obere ụlọ m DIY agba ma ugbu a, ọ bụ oge maka ihe kacha mma na-adọrọ adọrọ na agba ndị mara mma mana anyị ga-ahụ oh my god look na ya mara mma oh Chineke m hụrụ ya n'anya mana nke a bụ kpọmkwem agba m chọrọ ka m wee tinye uwe mkpuchi abụọ na-esote site na Channel wee hapụ ya ka ọ kpoo ihe dị ka nkeji 20 ma ọ dị ka ọ dị mma ugbu a maka akụkụ aghụghọ ahụ. wepụ ihe mmado na-enweghị chipping ma ọ bụ na-emebi eku. Akwụkwọ mmado arahụla mana agba a kpọrọ nkụ ma oge eruola maka uwe ahụ doro anya na nke a bụ akụkụ kachasị sie ike, Umali kwuru ya mere enwere m olile anya na anaghị m agbagha nke ahụ mana enwere m obi ụtọ na ya, ọ dị mma nke ọma kwuo ya mara mma anya t yummy, ndị a bụ uwe mkpuchi atọ emere, aga m akpọ nkụ n'ime ihe dị ka awa 24 ugbu a ma ọ bụ ebe a mara mma, m ga-agwa onwe m na mmalite nke ọrụ agba agba a, anaghị m Echere m na m ga-eme ihe dịka nke a mana nnukwu ekele nye Bex na Ali maka ịrapara n'ahụ m Enwere ọtụtụ oku ekwentị mgbe m na-ese ya n'onwe m naanị iji chọpụta na enwetara m ya mana ọ were ihe dị ka ụbọchị atọ mana nke ahụ bụ zuru ụbọchị atọ nke ọrụ, e nwere ton na-eche na agba nkụ na iwere ọnụ niile aerosol na-efu m ihe dị ka £ 80 yabụ ọ bụghị oke ọnụ ma ọ bụrụ na ị nwere ebe ochie ịgha ụgha na m ga-akwadoro ịme obere agba. n'elu ya n'ihi na ọ bụ? ihe dị ezigbo ụtọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ndụmọdụ ụfọdụ n'aka ndị ọkachamara n'onwe ha, ọ bụghị site na onye na-amu amu a, gaa Bex na Alis Youtubechannel dị ka igwe kwụ otu ebe m, biko nye isiokwu a nnukwu mkpịsị aka aka ma mee ka m mara na ngalaba ndị dị n'okpuru, ihe ị chere n'ime ya
Nwere ike hazie igwe kwụ otu ebe BMX?
Ị nwere ikeugbu a nanị ihe fọrọ nke nta chepụta aBMXnke giAgbammasị.Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta aomenala BMX, biko gawa n'ụzọ a.
Ekele onye obula ma nabatakwa na uzo ozo nke Tuesday ebe n’isiokwu a, aga m ekpuchido ihe kachasi elu nke 5 nwere ike buru ezigbo nkwalite na igwe BMX gị BMX site n’onye eji mmadu na-agbali imeghari BMX, na ihe mbu na ndepụta bụ otu mgbidi rim na a na-ekechighị oghere. Ihe ndị a bụ ihe mbụ ịchọrọ iji dochie igwe kwụ otu ebe BMX gị. ọ bụrụ na ha nọ ya.
Ugbu a n'ezie enwere obere igwe kwụ otu ebe zuru ezu nke ị nwere ike ịzụta ọhụụ ma ọ bụrụ na ịzụta zụrụ ya ọ bụ egwuregwu bọọlụ dị iche iche. Ma n'agbanyeghị ihe ọ bụla, ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe gị nwere otu mgbidi ma ọ bụ mkpuchi a na-ekpuchighị ekpuchi ndị a bụ ihe mbụ ị chọrọ iji dochie anya dịka otu mgbidi na-ehulata ngwa ngwa ma ha ga-arụ ọrụ ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla ọzọ na igwe kwụ otu ebe gị na oke nkụda mmụọ nke ahụ ha nwere ike ibute na-abawanye oge, yabụ, m ga-akwado ịzụrụ rim nwere mgbidi abụọ yana machị ụzọ dị mma na ịzụta akụkụ dị mma. Azụla nhọrọ mmefu ego n'ihi na nke bụ eziokwu bụ na nhọrọ mmefu ego adịlarị nso na ihe ị nwere ma ọ gaghị aba ego iji kwalite ọ gwụla ma ịnweghị ma enweghị ike ịzụrụ ịzụta ihe ọ bụla ọzọ karịa akụkụ mmefu ego, yabụ mgbe ọ ga-abanye na ụkwụ, nke a bụ otu ebe ị na-achọghị ịga na-enweghị ịzụta ihe dị mma ịmalite site na maka ezigbo ogige na ezi rim nwere ike ịdị ogologo oge na m ga-agwa ị ugbu a, m n'ógbè nlekọta ọrụ na m igwe kwụ otu ebe bụ ihe karịrị 6 afọ na ha siri ike na mbụ biarin na n'ihu ehiwe na mbụ ọkwọ ọbụna na azụ ehiwe.
Nọmba 2 na ndepụta ahụ bụ ndụdụ ndị na-abụghị chromoly, nke bụ nke na-eme ihe n'eziokwu n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu mgbidi na mgbidi ndị a na-ekpuchighị, naanị n'ihi na nsonaazụ nke ndụdụ nwere ike bụrụ ọdachi ma ha nwere ike merụọ gị ahụ nke ukwuu ma ọ bụrụ si chioma na n'agbanyeghị ebe ha si, na-abụghị chromoly ndụdụ na a freestyle BMX igwe kwụ otu ebe na-etinyecha ịbụ g ọzọ ewekarị ekwe na-agbasa karịa ihe ọ bụla chromoly ndụdụ ị pụrụ ịchọta na nke a bụ ebe ọzọ m nwere ike ikwu adịghị uche na-efu n'ihi na mgbe ị na-akwụ obere mmezi ị ga-enweta ndụ nkwa mgbe ị zụrụ nri ndụdụ, na na ndụ nkwa kwesịrị ya, oge ọ bụla na site n'ụzọ, M kpam kpam ịghọta ihe abụọ mbụ na ndepụta a bụ oké ọnụ. Mgbe ụfọdụ ọbụna karịa gị dum na-eri ego. Ma e nwere ihe kpatara ya.
Igwe zuru ezu na-abụkarị mmalite dị mma maka onye mbido, mana ozugbo ị nwetara ọkwa ọkwa ụfọdụ ma nwalee ihe ụfọdụ na igwe kwụ otu ebe gị, naanị ihe ị ga-achọ bụ akụkụ ndị a iji chebe onwe gị ka ị na-agba ịnyịnya. Nke ahụ na-ewetara anyị akụkụ nke atọ na ndepụta ahụ ma ndị a abụghị Ogwe Chromoly. Nke a dịtụ ọnụ ala karịa ndụdụ ma ọ bụ naanị ihe na-esote nwere ike ịda na listi ahụ.
Ihe aka gị ga-erutụ gị ala tupu ọkpụkpọ ụkwụ gị ma ọ bụ ụkwụ gị agbaa. Ọ bụ ya mere o jiri bụrụ nọmba 3 na ndepụta ahụ. Nke a bụkwa ohere zuru oke iji mụta jiometrị nke igwe kwụ otu ebe ka ịzụrụ akụkụ ọhụụ ga-emepe ụwa ọhụrụ nke jiometrị nke ị nweghi ike ịmara dị adị.
N'ihe banyere njikwa m nwere isiokwu banyere jiometrị ha na ihe kpatara akụkụ dị iche iche nke jiometrị ha pụtara na mmetụta ha nwere na ịnya ịnyịnya Hawe njikọ na nkọwa dị n'okpuru, gbakwunye kaadị ama na nkuku ihuenyo. Nke ahụ na-ewetara anyị ịkọwa 4 na ndepụta ahụ, nke bụ etiti nwere akụkụ nke ya na-abụghị chromolytic. May nwere ike ịchọpụtala omume ebe a na ihe ole na ole ikpeazụ dị na listi ahụ bụ ndụmọdụ niile maka dochie akụkụ ndị na-abụghị Chromoly n'ihi na, dịka m kwuru ugboro ugboro n'isiokwu a, n'oge ụfọdụ na usoro nke ịkwọ ụgbọala, ọ bụ naanị ị chọrọ akụkụ chromoly iji chebe nchekwa gị yana etiti adịghị mkpa dị ka ndụdụ na njikwa aka na otu mgbidi nwere mgbidi na oghere a na-ekpuchighị naanị n'ihi na etiti nwere ike ịmekwu ihe karịa ma eleghị anya ọ bụghị ihe dị ugbu a na ịnya ịnyịnya ime nke ahụ kama imebi etiti ahụ karịa imebi akụkụ ndị ọzọ anyị na-ekwu maka ha.
Dị ka m kwuru, ọ bụrụ na ị nwere akụkụ ọ bụla nke etiti gị nke na-abụghị chromolytic, ọ pụtara na ọ bụghị otu ọkwa dịka etiti Chromoly na-esote. A ga-enwekwa ihe ịchọrọ ịlele anya dochie anya ya. Nke a bụ nke ọzọ dị oke ọnụ, amaara m.
Akụkụ ọzọ na nke a bụ na ị nwere ike ịzụta akụkụ eji. Nwere ike ịzụta ihe eji eme ihe mgbe ị na-ere ahịa nke nwere ike ịka mma na ogologo oge karịa ịnwe akụkụ ọ bụla nke etiti gị nke ígwè siri ike. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnwere ike imeli ya, aga m akwado ịpụ maka ihe ọhụụ na nkwa ọhụụ na ọ bụrụ na ihe ọ bụla emee ị gaghị echegbu onwe gị.
Nke ahụ na-ewetara anyị ihe ikpeazụ na ndepụta anyị - akụkụ nke 5, nkedo nkedo. A nkedo azuokokoosisi bụ nanị ihe ọzọ n'ichepụta usoro na he na-akwụ ụgwọ tremendously na-enye ohere ka ọ na-ndokwasa na a zuru igwe kwụ otu ebe iji belata n'ozuzu na-eri nke bike. Ma ọ na-achụkwa ike ụfọdụ ma e jiri ya tụnyere nke azuokokoosisi CNC.
Ihe dị iche n’etiti ihe nkedo na nke cnc’d dị mfe. A nkedo azuokokoosisi, nke a na-eme site na ịwụsa aluminom a wụrụ awụ ka ọ dịrị n'ụdị nke ọdịdị, ebe CNC stem. Gee ga-ebipụ site na mgbochi siri ike nke aluminom.
Ndị a na-adịkarị ike ma, n'aka nke ha, dị oke ọnụ karịa osisi ịkpụ. Nke a bụ ya mere ha (awụ osisi) hụrụ na igwe kwụ otu ebe zuru oke, nke mere na ha nọ na ndepụta a dị ka ihe ịchọrọ iji dochie n'ihi na, dị ka ndụdụ gị, ọ nwere ike bụrụ ihe ọjọọ ma ọ bụ njọ karịa ka ị chere n'echiche mkpụmkpụ ga-adị, dabere na ọnọdụ ahụ. Ma ugbu a, anyị abanyela na ndepụta nke ndepụta ahụ, ị ​​nwere ike na-eche, dude, ị depụtara akụkụ ọ bụla dị mkpa na igwe kwụ otu ebe.
Yabụ na enwere otu ihe dị mkpa anyị kwesịrị iji mesie ike ebe a, na enwere ihe kpatara igwe kwụ otu ebe zuru oke dị adị ma nwee ụdị igwe kwụ otu ebe. Complete anyịnya igwe na-zubere maka onye na-amalite ma na-amụta ihe ndị bụ isi na ma eleghị anya, ọ bụ naanị nwatakịrị na-agba ịnyịnya ígwè na gburugburu na okirikiri. Na site na oge ị nwetara otu larịị nke ịnya ike, igwe zuru oke agaghị anagide mmegbu ị na-achọ ịtụkwasị ya.
Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụghị n'ikpeazụ. May nwere ike ịnwe ike iwepụ ya nwa oge, mana ọ gaghị anagide ụdị mmegbu ahụ dị ka igwe kwụ otu ebe sitere n'akụkụ ahịa. Ọ bụ ya mere m ji eme isiokwu a iji nye gị ndị bekee, ndepụta a, yabụ na ị maara ihe kacha mkpa iji dochie igwe kwụ otu ebe gị, n'usoro kachasị dị mkpa dabere na ihe ị na-eme igwe kwụ otu ebe, na n'ezie , dị ka m kwuru na mbido, ọ dabere na igwe kwụ otu ebe ị nwere.
Ọ bụrụ na ị zụtara igwe kwụ otu bekee nke eji eme ihe enwere ike iji ya, ị nwere ike ọ gaghị adị mkpa iji dochie ihe ọ bụla ma ị nwere ike ilele isiokwu a nke kwuru 'nwetara ya, nweta ya, nweta ya, nweta ya' don'tgaghị echegbu onwe gị maka ihe ọ bụla. , ma ọ bụrụ na ị nọ kemgbe kemgbe afọ ole na ole na-agba ịnyịnya igwe zuru oke ị nwere ike ịnweta site na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe, enwere ike ịnwe opekata mpe ihe ole na ole na ndepụta a nke ị nwere nsogbu na ya nwere ike. nwere iji dochie. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ndị a bụ ihe ị ga-achọ ịhụ.
Chee echiche dochie ha tupu ihe ọbụla emee ha. Nke ahụ mechiri ederede a nwere ike iji ihe kachasị elu 5 nwere ike ịnwe ma nwee ike ịkwalite maka igwe BMX gị. Ekwela ka ndepụta a mee ka ị daa mbà ma ụgwọ ọ ga-efu, nke a bụ ihe onye ọ bụla na-agba ịnyịnya BMX gafere ma rapara na anyị niile kwesịrị imelite akụkụ anyị ka anyị na-amụta, mana ụfọdụ n'ime anyị ahọrọ ịghara ma ọ bụ naanị họrọ naanị enweghi obi uto na imebi ihe ma muta uzo di ike.
Ya mere, jiri ndụmọdụ a kpọrọ ihe, chekwaa ego, ma zụta akụkụ dị mma yana akwụkwọ ikike ka ị nwee ike hụ na ndụ gị na BMX na-agba ịnyịnya na nchekwa. E nwere ihe ole na ole ndị ọzọ na-adịghị mkpa na igwe kwụ otu ebe gị nke ị nwere ike dochie anya tupu ihe ndị dị na ndepụta a bụ taya taya dị ala ma ọ bụ mpempe mpempe mpempe mpempe 3. Mana ihe ndị a bụ ihe ga - ewe obere oge ọbụlagodi ndị nwere ọkwa nka dị elu nwere ike gbanahụ iji ha wee ghara imebi ha tupu ụfọdụ akụkụ ndị ọzọ dị na ndepụta a nwere ike ịgbaji, yana nke ahụ ka m chọrọ ka ụmụ nwoke lelee anya daalụ.
Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, mee ka m mara n’ihe a n’okpuru. Mee ka m mara ihe ị nwetara n’ịnyịnya ígwè gị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla m ga-aza ha n’ime ihe ndị dị n’okpuru. Ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ ebe a, pịa bọtịnụ ịdenye aha n'ebe ahụ kwa.
M na-eme edemede na usoro aghụghọ dị ka nke a na Tuesday ọ bụla na BMX akụkọ akụkọ na Fraịdee na ụdị ndị ọzọ nke ịkwọ ụgbọala na iyi n'oge izu. Daalụ maka ikiri na ịhụ gị echi. Ka ọ dị
Gịnị mere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ihe na-adịghị mma maka ndị na-agba ígwè?
Agba akwụkwọ ndụBikes bụỌ dị njọChioma
Ruo ogologo oge, ndị na-agba ịnyịnya tụlereacha akwụkwọ ndụegwuagba maka ọgba tum tum. Ọ bụrụ n’ịnyịnya ibu aacha akwụkwọ ndụigwe kwụ otu ebe, e kweere na ya, o yikarịrị ka ị ga-akụ ma nwụọ. Mgbe ahụ, mgbe agha ahụ gasịrị, a kpọbatara ọtụtụ igwe kwụ otu ebe ahụ n'ụlọ wee ree dị ka njupụta.Ọkt 21 2020
Enwere ọtụtụ uwe dị iche iche na ụwa ịgba ígwè, mana ị nwere ike ịkpọ ha niile? You mara na ị bụ nke m Amalia Rosa jeans? N'isiokwu a, m ga-ejegharị gị site na ụfọdụ uwe ndị a ma ama na ụwa nke ịgba ígwè, gịnị ka ha na-anọchi anya na ebee? Ha sitere na Anyị malitere site na njiri mara amara kachasị na ịgba ịnyịnya Ọbụna ndị na-abụghị ndị ịgba ịnyịnya ígwè ga-amata na onye ndu nke Tour de France ga-eyi akwa ahụ na-acha odo odo. Nke a bụ jersey nke ndị ọkachamara ịgba ígwè na-atụ anya na ịrara ndụ ha niile na Tour de France na-eduga Jersey na dị ka mgbe niile, a ga-emeri ọtụtụ agbụrụ kachasị, dịka ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Nke ahụ bụ na 1919, mgbe Tour deFrance, mgbe afọ anọ metụtara agha kwụsịrị, mere nloghachi ya ụzọ abụọ n'ụzọ atọ na oge 5560 kilomita na nke 325 kilomita, onye isi agbụrụ agbụrụ Onritu Court kpebiri na onye ndu nke agbụrụ ga-apụ na ndị ọzọ na-asọmpi na ya mere tupu ha abụọ amalite ogbo na July 18, 1919 o cean Christophe si France tinyere uwe na-acha odo odo maka oge mbụ, mana n'oge ahụ ọ bụ naanị otu ụzọ iji mee ka ahụ mara onye nduzi agbụrụ, mana oge a agbanweela ịbụ otu n'ime uwe ndị ama ama agbaala agbazigharị ghọrọ, mana gịnị kpatara eji ahọrọ agba odo n'ihi na ọ bụ akwụkwọ nkwado akwụkwọ akụkọ iji debe ụbọchị ndị a, ọ bụghị naanị otu ndị otu egwuregwu ndị a nwere okpu igwe na-acha odo odo na ngwa igwe kwụ otu ebe mgbe otu n'ime ndị na-agba ha na-eyi uwe na-acha odo odo, nke na-esote nwa Jersey Insight na-achọpụta na m chere na ihe kachasị mma bụ uwe polkadot, nke a makwaara dị ka d ọ Eze nke Ugwu Jersey ọ bụla dị ịrịba ama ịrịgo nke e tour nwere ihe na elu ugwu, ma ike ọrịrị, ihe ndị ọzọ na-ọdịda, ebe ihe ndị kasị ihe na-na mmalite nke ụbọchị ọ bụla na chi ọbụbọ na ntụpọ Jersey ugwu nhazi ọkwa anọwo ebe kemgbe 1933, ma e nwere E nweghị jersey Ọ bụghị ruo na 1975 ka enyere onyinye ọcha ahụ na-acha uhie uhie polkadots mana gịnị kpatara ntụ ntụ polka ihe enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na van teenswell ọ bụ n'ihi otu n'ime ndị nkwado schokoladenpool ga-ekpuchi ụlọ mmanya chocolate na polkadots na polka dot jersey bịara ọzọ na obere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ahụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ a makwaara dị ka Mein karịrị na 1952 Tour deFrance, ngwa ngwa oyiri kwaa mgbe merie site na otu nnukwu oke niile akwụsịla n'ihi ya, ụfọdụ agbamume ndị ọzọ bụ ndị na-ahazi ka ẹkenam akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ jersey The Sprint jersey dị ka onye na-agba ịnyịnya polkadot na-anakọta akwụkwọ ndị e bipụtara n'ụzọ ahụ, mana ọ bụghị n'ugwu a n'oge a na-agba ọsọ agba agba, mana enwere onyinye maka ngwụcha, yabụ ndị nhazi ahụ kpebiri ime ememme rie ncheta afọ nke iri ise na 1953 na jikọtara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba, ọ ga-abụ na ọ bụ otu n'ime ndị na-akwado njem nlegharị anya na aha Sardinia Onye na-acha ọcha ọcha, nke a makwaara dị ka MayanBlanc, bụ nke na-acha odo odo jersey mana maka ndị na-eto eto nke a bụ na Jersey maka n'elu họọrọ n'okpuru 25 sentimita asatọ n'ozuzu nhazi Ọ bụ na 1975 mgbe mbụ e jersey ma ọ bụ naanị maka ndị na-agba ịnyịnya n'ime afọ atọ ndị a mbụ n'ịgba ọsọ ọkachamara, mgbe ahụ na 1983 a gbanwere ya naanị ndị ọkwọ ụgbọala oge mbụ bụ ruo eruo, na na 1985 ọ ọdịda enwetara jersey gbanwere n'okpuru ndị ọkwọ ụgbọala 25 site na 1989 ruo 1999, mana na 2000 ọ laghachiri ma ọ nọwo ebe ọ bụ na ọ na-eduga ndị uwe ojii Giro themaglia pink Nke a bụ otu ihe ahụ dị ka akwa edo dị n'elu , ma ọ bụ pink na agba pink sitere na akwụkwọ akụkọ egwuregwu Italiantali, nke kwụrụ ụgwọ ọsọ ahụ wee bipụta ya na akwụkwọ pink dị iche na jersey ọzọ na jubilation pink jersey ka dị otu kemgbe onyinye mbụ na Giro na-acha odo odo jersey bụ sprinter jersey ọzọ ahụ dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na Tour de France ma ọ bụ odo odo Na 1967 e tinyere akara sprint ahụ mgbe ahụ ọ bụ uwe na-acha ọbara ọbara na na 1969 ndị nhazi ahụ kpebiri na-acha odo odo na-acha odo odo na-acha odo odo ruo na 2010 mgbe ndị na-ahazi kpebiri ịgbanwe ya na-acha uhie uhie ma na 2017 ha gbanwere ya ma ọzọ na lilajesse Na-acha anụnụ anụnụ, nke a makwaara dị ka Lea Asura brand, bụ ihe kacha mma na-arị elu jersey, nke bụ otu ma dị iche na uwe PolkaDot na Tour de France. Nke a bụ uwe elu ugwu maka Giro na 1974, uwe ahụ ghọrọ nke mbụ a na-enye onyinye otu ugboro na mgbe ahụ ọ na-acha akwụkwọ ndụ ruo mgbe 2012 mgbe onye nkwado ahụ na-akwado Bangkamedal Alaun, an Italiantali ,tali, mere ka nkwado ya dị ọhụrụ ma gbanwee acha anụnụ anụnụ ọzọ ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị mgbe ahụ, mgbe mbuba malitere na 1931 ọ bụ oroma yana na 1941 ọ gbanwere ọcha na otu afọ yana m laghachiri na oroma na 1955 , mgbe ahụ ọ gbanwere na-acha odo odo, otu agba dị ka tour de France na ọ nọrọ odo mgbe niile ruo mgbe 1999 na otu isịneke ke 1977 mgbe ọ gbanwere ka oroma, na-acha uhie uhie jersey nakweere na 2010, na egwurugwu jersey ihe incredibly pụrụ iche Jersey na ụwa nke na-agba ịnyịnya ígwè na otu nke ọtụtụ ndị ọkachamara na-agba ịnyịnya ígwè na-arọ nrọ nke Mmeri jersey nke enyere onye na-agba ọsọ mmeri nke ụwa n'ọtụtụ egwuregwu nke ịgba ịnyịnya ígwè n'adịghị ka uwe ọ bụla ọzọ a na-eyi n'oge agba ọsọ ahụ, a na-eyi uwe ojii egwurugwu n'afọ niile ma nwee ndị mmeri agbụrụ ruo mgbe asọmpi na-esote wee kwado ohere ị yikwasị ụdọ egwurugwu na jersey gị na olu akwa ma ọ bụ na aka uwe.
Na 1927 e webatara egwurugwu egwurugwu dị ka uwe ojii T nke kachasị ọcha nke amụrụ site na ala elu na mmachi UCI, mana agba ndị ahụ na-acha odo odo odo na-acha ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụ ndị a na-egosikwa na mgbaaka Olympic Ọtụtụ ihe omimi gbara gburugburu mmalite nke egwurugwu egwurugwu, ma ndị mbụ agba e mere site na nchoputa nke Olympic ije Baron Pierre de Coubertin Okay, nke a abụghị a jersey, nke a bụ akụkụ dị oké mkpa nke Tour de France na nke a bụ ugbu a unofficial enọ na e nyere ndị ikpeazụ onye na-agba enịm . Na mkpokọta, aha ahụ sitere na oriọna na-acha uhie uhie nke eyịruru n'azụ ụgbọ ala ndị mgbaàmà ahụ ga-ele anya iji hụ ma ụgbọ oloko ndị ọzọ akwụsịla. Anyị na-atụ anya na ị masịrị ọhụụ a nke ụfọdụ uwe ama ama na ụwa nke ịgba ígwè, mana kedụ ihe kacha amasị gị? Kedu ihe mere na ị gaghị aga ngwa ngwa gcn wee kwuo ihe kacha mma ịgba ịnyịnya ígwè na ihe kpatara ya na ebe ahụ ka ntụ ntụ polka si hmm hmm ọ bụ na 1975 ka eburu ụzọ jersey mana ọ bụ naanị ndị na-agba ịnyịnya maka afọ atọ mbụ nke ọkachamara n'ịgba ọsọ, mgbe ahụ 1973, 1983
Olee Agba Na-agba Ọsọ?
Ndị ọkà mmụta sayensị Norwegian kwuruAgbaacha anụnụ anụnụ bụagba kachasị ọsọ.Wa 11 2018
Nwere ike nweta nkwalite ọgba tum tum na GTA 5?
Otu ugboroị na-emeọrụ ozu na ọrụ engine zuru ezu, mgbanwe ụgbọnwere ikemalite.Gịenweghị ike ịgbanwe ihe ọ bụla n'ụgbọ gị ruo mgbe emeziri ya. Nọvemba
Gịnị bụ ihe kasị customizable ọgba tum tum na GTA 5?
Ihe njirimara: wmc128. Western Daemon na Bagger nwereọtụtụNhọrọ site na njem ụgbọ mmirianyịnya igwe. Ndị agha n'okporo ámá dịka PCJ 600, Ruffian, Akuma nwere ndị ọzọOmenalanhọrọ karịa ndị agha n'okporo ámá ndị ọzọ dị ka Double T, Bati 801, na Vader.
Gini ka FTW putara ndi igwe igwe?
Ọfọn, enwere ọtụtụ nkọwa maka ụdị dị mkpirikpiFTW. Otú ọ dị, nabikerịsụ asụsụ ya a na-echekarị. 1. Ruo Mgbe Ebighị Ebi abụọ.13.09.2018
Gịnị na agba bụ ọjọọ chioma maka ọgba tum tum?
Iheọjọọ ọjọọn'ụzọ ụfọdụ rapaara na Harleys. Otu onye nụrụ na-acha akwụkwọ ndụọgba tum tumnwere ike ịbanye n'ime ala ma mee ka o sie ike ịhụ. Ka ọ na-enyo, naAgbae jikọtara ndụ ndụọjọọ ọjọọna ihe ojoo maka otutu oge, uzo gara agaọgba tum tumna ụgbọala.07/29/2014
Ọ na-acha uhie uhie ngwa ngwa karịa acha anụnụ anụnụ?
Na ikuku, iko, mmiri na ọtụtụ ihe ndị ọzọ transperent,netìhè njemngwa ngwa karịa acha anụnụ anụnụọkụ.
Kedu agba nke na-adọrọ anya mmadụ karịa?
Yellow bụọtụtụ anya-nwetaAgba, ma odo nwere ike ịbụ ihe na-agwụ ike naanyana ịchịkwa uche.
Kedu ụdị agba ị na-eji igwe kwụ otu ebe?
Agba agbaghachila! Enweghị drips, Ọ dịghị dribbles, Ọ dịghị nsogbu oge! Ihe mkpuchi agba acryli anyị mepụtara adịghị ka igwe ọdịnala ma ọ bụ agba ụgbọ ala ma dabara adaba maka akụkụ ígwè, aluminom na carbon. Dị ka agba bụ ihe mkpuchi nke uzuzu na-adịghị adapụsị, dribble ma ọ bụ na-akpa àgwà ọ bụla ma na-enye akwa dị omimi nke nwere naanị otu uwe.
Enwere nchịkọta agba maka BMX anyịnya igwe?
Nke a na BMX Agba Editor na-enye gị ohere ịnwale usoro agba dị iche iche maka igwe BMX gị tupu ị gbalịa gbaa ya agba ma ọ bụ zụta akụkụ niile na agba ị chere ga-adị mma. Enwere ọtụtụ agba ịhọrọ site na, site na oji ojii na agba ọ bụla na egwurugwu ka chrome na raw.
-esi mee ka a kọfị onye
Kedu ụdị agba dị iche iche nke Trek Bikes?
Trek jiri agba dị iche iche na akụrụngwa na ụdị dabara na mmasị mpaghara. (You nwere katalọgụ UK / European Trek ọ bụla? Ọ bụrụ otú ahụ, biko zitere m ozi.) Maka eserese (eserese) na igwe kwụ otu ebe ha, Trek na-ejikarị otu ma ọ bụ abụọ ndabere ma ọ bụ agba agba.